Famakiana plastika tsy misy fotony amin'ny Blow Molding
Notsongaina ambany: kitapo, kitapo fatotra, Space saving
Mampitandrina ny tsipika amin'ny fijanonan'ny micro ny andalana. Mamaha ireo olana momba ny fametahana labels, toy ny famonosana tavoahangy, famonosana, fijanonana matetika. Mampitombo ny fahombiazan'ny tsipika fonosanao. Azonao atao ny mihodina eo anelanelan'ny hatsiaka sy ny famonosana.
Published in Mpita hafatra
Notsongaina ambany: shrinkage, fikaonan-dàlana, fahaiza-manao andalana, buffering, hihena, fametahaka marika
Latabatra buffer - mandeha ho azy tanteraka
Ny latabatra buffer dia mahatonga ny tsipika tsy hijanona amin'ny fijanonana mikraoba: ny fijanonana amin'ny milina fanetezana, ny labera… Mampitombo ny fahombiazan'ny tsipika fonosanao. Nampiasaina teo anelanelan'ny tsipika famonoana & famenoana tsipika.
Published in Latabatra
Notsongaina ambany: fikaonan-dàlana, fahaiza-manao andalana, buffering, fametahaka marika
Latabatra fampangatsiahana sy buffer - ho an'ny fiasa roa
Ny latabatra fampangatsiahana sy ny buffer dia mamaha ny olana mahazo ny buffer sy buffer amin'ny famolavolana. Misoroka ny fijanonana amin'ny tsipika mihintsy amin'ny milina fanangonam-bokatra ary misoroka ny lavarangana. Mpampita buffer: 1200 mm ny sakany, 4000 mm ny halavany. Mampitombo ny fahombiazan'ny tsipika fonosanao.
Published in Latabatra mangatsiaka
Notsongaina ambany: fikaonan-dàlana, fahaiza-manao andalana, buffering, hihena, banga amin'ny labels
Ny latabatra fampangatsiahana sy ny buffer dia mamaha ny olana mahazo ny buffer sy buffer amin'ny famolavolana. Misoroka ny fijanonana amin'ny tsipika mihintsy amin'ny milina fanangonam-bokatra ary misoroka ny lavarangana. Mpampita buffer: 1400 mm ny sakany, 4000 mm ny halavany. Mampitombo ny fahombiazan'ny tsipika fonosanao.